Maxaa Ku Dhacaya Qofka Sooman Beerkiisa?..Waa Tan Jawaabta | Xaqiiqonews
Maxaa Ku Dhacaya Qofka Sooman Beerkiisa?..Waa Tan Jawaabta
Saynisyahano ka socday Jarmalka ayaa baaritaan kimikeed ku sameeyey waxa ku dhacaya jirka qofka Sooman, natiijo cajiib ah ayeyna soo saareen.
Saynisyahano Jarmal ah oo ka tirsan xarunta dhexe ee cilmibaarista Kansarka iyo kuwa ka socday machadka Helmholtz ee qaabilsan baarisyada caafimaad kuna yaal magaalada muniij, ayaa soo saaray warbixin sheegeysa in soonka saameyn wanaagsan uu ku reebo jirka aadanaha gaar ahaan cudurka beer baruurka ee dunida aadka ugu faafsan.
Soonka ayaa dhanka kale qeyb ka qaata in uu yareeyo qaar ka mid ah dhibaatooyinka ka dhasha cayilka sida laga soo xigtay wargeyska Jarmalkaka soo baxa ee “Augsburger Algemeine”.
Sida uu daabacay joornaalka “Molecular Medicine” , saynisyahanada ayaa ogaaday waxa ku dhaca jirka qofka sooman, waxa ay sheegeen in jirka uu soo saaraayo barotiin saameynaya isbadalada ka dhaca beerka, taasi oo qeyb ka qaadaneysa in uu yaraado baruurta beerka.
Dhaqtar Adam Rose oo ka tirsan xarunta dhexe ee baarista Kansarka, ayaa faallo ka dhiibtay cilmi baaristan isaga oo yiri “waxaa suuragal ah in aan daaweyno beer baruurka(beer weynaashada), markii aan fahano sida soonka arintani u saameeyo”.
Dr rose waxa uu hadalkiisa ku soo xiray “istareeska uu sababo soonka waxa uu qofka sooman ku sababayaa in soo saaro borotiinka kaasi oo yareeya baruurta beerka”.